🥇 ▷ Bilow xiisaha wanaagsan ee xiisaha leh ee aaladaha Crazy Shapes ✅
Bilow xiisaha wanaagsan ee xiisaha leh ee aaladaha Crazy Shapes
Crazy Shapes waa ciyaar ku cusub Android taasna asal ahaan waa gole aan u adeegsan doonno tilmaamayaasha si aan ugu boodno oo aan u noqono jilayaasha kala duwan. Astaamahan ayaa noo anfici doona inaan qabanno xirfado kaladuwan sida ololaha ka dhanka ah cadawga soona burburiyo burburin.
A dhulal fiican oo naqshadeeya heerarka iyo waxyaabo u gaar ah naftooda, waxay ka dhigayaan ciyaar xiiso leh inaad waqti fiican hesho. Ciyaar laftiisu leh qayb ka mid ah waxa aan ku aragno madal. Aynu aragno sida ay uga duwan tahay inta kale ee cayaaraha noocan ah ee buuxiya Google Play Store.
U adeegso awoodaha qaaska ah qaababka Crazy
Marka hore waxaad maamuli doontaa horjoogaha ugu weyn yaa keligeed ayey u dhaqaaqi doontaa sidaa darteed waxaad u baahan tahay oo keliya inaad sameyso tilmaam si uu u boodboodo, oo uu uga fogaado taabashada cadawgaas tooska ugu imaan doona. Ficilkan oo loo adeegsaday qaybo kala duwan ayaa sababi doona dhaqdhaqaaqyo kala duwan. Soo-saarahayaasheena ayaa garaaci kara darbiyada si uu u siidaayo kuwa kale sidaas darteedna wuxuu u adeegsan karaa mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyada aasaasiga ah ee cayaaraha noocan ah.
Arrinta la yaabka lihi waxay timaaddaa ka dib marinka heerarkii ugu horreeyay markii Aynu tagno qaar ka mid ah munaaradaha xoogga ina siin doona awoodaha qaarkood. Mid ka mid ah iyaga ayaa ah gacan ka hadalka tilmaanta dambe. Daqiiqadahaas markaan aragnay cadow weyn oo jidkayaga ku jira, waa inaan sameynnaa tilmaam xagga dambe ah si markaas kuwa soo duushay ay u weeraraan sidii isagoo dibi geesi ah.
Markaa waan gawracayaa inta aan boodno oo aan iska ilaalinno qaybaha kala duwan ee si xikmad leh loogu meeleeyo si marka aan u ciyaarno waxyaabo aan u sii adkaano. Taasi waa, marka loo eego ficil ahaan aan sameyno, prota wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah is beddelkiisa si loo soo saaro xirfado kala duwan.
Madal sifiican loo qabtay
Marka waxaan u adeegsan karnaa awoodaha kaladuwan ee super-ka iyadoo loo eegayo qaababka aan badalno. Tan iyo jab weyn, dardar ama xitaa tuur Waa qaar ka mid ah xirfadahaas gaarka ah oo aad ku hesho daqiiqado aad u xiiso badan oo xiiso leh. Dhammaan xilliyeed waxaa ikhtiyaar u ah samatabbixinta xulafada, isku xirka tamarta qorraxda iyo furitaanka albaabbada.
Waxaa sii dheer waa maxay ukunku, taranka xoolaha iyo kulanka ay la yeeshaan lamaanayaasheeda si loo furo xirfado badan oo kala duwan si looga gudbo heerarka ugu adag. Waxa la dhihi karo waxaan wajahaynaa ciyaar dhib badan sida aan horumarsan nahay, markaa haku talagalin inaad kubixiso wax nus saac ama badh ah, waxaad ubaahan doontaa wax kale.
Ma jiraan wax-qabadyo maalmeed si gacan looga geysto inaan waligaa laga maqnaan waxyaabaha maalmaha, ama usbuucyada, sida ku xusan khibradeena, waxay nagu qaadataa inaan dhameysano Crazy Shapes ama aan u gudubno aagag kale. Sidaas oo ay ahaataba, ragga ku ciyaara Ciyaaraha Rogue waxay ka shaqeeyeen meel moodeel ah mobiladeena.
Beddel qaabka oo u duulo heerarka
Xaqiiqada kartida jidkaaga u beddel tilmaamaha kala duwan in aad firfircoonaan karto, gelineyso qodob aad u muhiim ah si aad isugu daydid in aad ogaatid waxa ugu wanaagsan ee looga gudbi karo heerarka. Horeyba, adiga oo kula wareegaya, waxaad qaadan doontaa gustillo si aad u siiso xoogaa dharbaaxo leh oo si lama filaan ah aad ugu dhakhso badan heerka inta aad boodayso. Ma gaaro dhererka Oddmar, laakiin waxay ku dhowdahay hal-abuurka iyo fudeyd.
Farsamo ahaan si fiican ayey u shaqeysaa Xitaa kuwa ku soo xadgudbay waxay leeyihiin mid jecel inay jeclaadaan. Waxaan soo bandhignay jawiga kaladuwan iyo sida heerar dhowr ah aan horeyba u leenahay cadaw kala duwan oo wanaagsan. Waxaan sidoo kale iftiimineynaa qaabeynta weyn ee mid kasta oo ka mid ah heerarkan si aan uga yara shaqeyn karno dhammaystirka.
Qaababka Crazy waa aalad kuufiyo wanaagsan oo Android ah, inkasta oo freemium ay la socoto xayeysiinta, taas oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u ciyaarto oo taas daqiiqadaha gudahood waxaad qaadan doontaa dhowr heer oo aad jeceshahay inaad dheeri u ciyaarto. Waxaad hadda uga soo dejisan kartaa Play Store si lacag la’aan ah si aad wax uga baratid dhammaan siyaabaha aad u beddeli karto.
Waxaad ku siin doontaa xayeysiin adigoon ogayn